U-Angela-Kwihlabathi lobuGcisa-Ukuhla ukuya eBukumkanini
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Angela ngo-Okthobha 8th, 2021:
Ngokuhlwa kwavela uMama enxibe ezimhlophe. Ingubo awayeyibhinqile nayo yayimhlophe, kwaye kwaloo ngubo yayigqume intloko yakhe. Entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini; Iingalo zikaMama zazivulekile ebonisa ukuba wamkelekile. Kwisandla sakhe sasekunene kwakukho irosari ende emhlophe, ngokungathi yenziwe ngokukhanya, eyayiphantse yehle ezinyaweni zakhe. Phezu kwesifuba sakhe kwakukho intliziyo yenyama ethweswe ngameva. Embindini wentliziyo idangatyana elincinane lalivutha. Iinyawo zakhe zazizé, zabekwa phezu kwehlabathi. Ehlabathini kwakukho inyoka, uMama awayeyibambe ngokuqinileyo ngonyawo lwakhe lwasekunene. Makadunyiswe uYesu Kristu...
Bantwana abathandekayo, enkosi ngokuba lapha kwihlathi lam elisikelelekileyo ngolu suku oluthandekayo kum. Bantwana bam, ngoku ngokuhlwa ndiza kuniphathela umyalezo wothando noxolo. Bantwana abathandekayo, namhlanje ndivuyisana nani, ndilila kunye nani, ndisondele kuni ngamnye wenu…. (Walatha entliziyweni yakhe), ndinibeka ngaphakathi kweNtliziyo yam Engagungqiyo. Bantwana, Intliziyo yam iyavutha luthando ngani, ibethelela ngamnye wenu…. Ndiyanithanda bantwana, ndinithanda kakhulu kwaye owona mnqweno wam mkhulu ngumnqweno wam wokunisindisa nonke.
Bantwana bam, ngale ngokuhlwa kwakhona ndinicela umthandazo: umthandazo weli hlabathi liya lisanda kubanjwa ngamandla obubi. Ndiyanicenga ke, bantwana bam, nikhwebuke kuyo yonke inkohlakalo. Xa uziva udiniwe yaye ucinezelekile, zimela ngomthandazo. Guqani amadolo nithandaze. Abaninzi bazibiza ngokuba bangamaKristu kodwa basabhenela kubaxeli-thamsanqa, abantu abafunda amasundu nakwihlabathi lobugqi, bekholelwa ukuba banokuzicombulula zonke iingxaki. Bantwana abathandekayo, ekuphela kosindiso kukuNyana wam, uYesu. Ncedani, bantwana, ningemki enyanisweni ngokulandela ubuhle bobuxoki nobuphukuphuku beli hlabathi. Bantwana abathandekayo, ndiyanicela ukuba nindimamele kwaye nizimele kusindiso lodwa olunguNyana wam, uYesu, owafela ngamnye wenu.
Emva koko uMama wandicela ukuba ndithandaze kunye naye; Ndabathandazela bonke abo babezibambe emthandazweni wam, kwanabo bonke ababingeleli ababekhona. Waphinda wathetha umama….
Bantwana, bathandazeleni kakhulu ababingeleli; musani ukubagweba, kodwa nibathandazele. Babuthathaka kakhulu kwaye bafuna umthandazo omkhulu.
Ekugqibeleni, ngokusuka entliziyweni kaMama, kwaphuma imitha yokukhanya eyayikhanyisela abanye babahambi ngezonqulo.
Ntombi, ezi zinceba ndikunika zona ngobu busuku.
Ekugqibeleni, wasikelela wonke umntu:
exhonyiweyo USimona noAngela.
← UGisella - Ngaba akuqondanga?
USimona-Thandazela Ubunye →